ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သည် BRICS ဘဏ်၏ ပထမဆုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ် ဖြစ်လာ - Xinhua News Agency
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သည် BRICS New Development Bank (NDB) ၏ ပထမဆုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ၎င်းဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ Marcos Troyjo က စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ပြောခဲ့သည်။“မကြာသေးခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သစ်ဟာ အဖွဲ့ဝင်သစ် ၃ ဦးကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့ ဘဏ်ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် ပထမဆုံး အာမခံငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ အခုအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်ရဲ့ တင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တရားဝင်ဖြစ်လာပါတယ်” ဟု ရှန်ဟိုင်းမြို့ Pudong နယ်မြေသစ်ရှိ ဘဏ်ရုံးချုပ်အဆောက်အဦး တွင် ကျင်းပသည့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှု အခမ်းအနားအပြီးတွင် ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ဤလွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုသည် လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်တာကာလအတွင်း ဘဏ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်ခဲ့သောအရာများအားကိုယ်စားပြုကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ဒါကရှန်ဟိုင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစင်တာတစ်ခုအနေနဲ့ မြို့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သိပ်ကို အရေးပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ဥက္ကဋ္ဌ ကပြောသည်။
ယူအေအီး၊ဥရုဂွေးနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကို ယခုလအစောပိုင်းတွင်အဖွဲ့ဝင်သစ်များ အဖြစ် ထည့်သွင်းသွားမည်ဟု ဘဏ်က ကြေညာခဲ့သည်။၎င်းအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှ စ၍ NDB သည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး၏ စီမံကိန်းပေါင်း ၈၀ ကျော်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ထည့်ဝင်သည့်ရှယ်ယာတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံရှိကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေနှင့်မိလ္လာစနစ်၊ သန့်ရှင်းသည့်စွမ်းအင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လူမှုရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ရုံးချုပ်တည်ရှိသည့် NDB ဘဏ်အား ဘရာဇီးလ်၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် တောင်အာဖရိက စသည့်နိုင်ငံများက ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
SHANGHAI, Sept. 29 (Xinhua) — Bangladesh officially became the first new member country of BRICS New Development Bank (NDB), the bank’s president Marcos Troyjo said on Tuesday.
“Recently we have had the admission of three new members of the New Development Bank. And Bangladesh was the first to deposit its instrumental accession. So officially, Bangladesh is nowafull member of our institution,” he said, after the handover and move-in ceremony of the banks’ permanent headquarters building in Shanghai’s Pudong New Area.
Additionally, he said this handover ceremony representsalot in terms of its institutional development and what has been accomplished over the past six years.
“I think it’s alsoagreat opportunity for Shanghai because we are an important addition to the city’s profile asaglobal financial center,” said the president.
The bank announced that it will add the United Arab Emirates, Uruguay and Bangladesh as its newest members earlier this month.
Since the beginning of its operations, NDB has approved about 80 projects in all of its members, totalingaportfolio of 30 billion U.S. dollars. The projects cover sectors of transport, water and sanitation, clean energy, digital infrastructure, social infrastructure and urban development.Headquartered in Shanghai, the NDB was established by Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The bank formally opened in July 2015. ■